နည်းပညာကုမ္ပဏီများပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်မိတ်ဖက်ဆန့်ကျင် - သတင်း Rule
အနာဂတျအတှကျအင်တာနက်ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ Fight (FFTF) တက်ဝိုင်းထားပြီး 29 information technology firms to signaletter that strongly opposes passage of the Trans Pacific Partnership (TPP) international trade treaty.
“We can only buildasuccessful innovation policy framework – one that supports new ideas, ကုန်ပစ္စည်းများ, and markets – if the process to design it is open and participatory. ကံမကောင်းသဖြင့်, the trade negotiation process has been anything but transparent. Our industry, and the users that we serve, need to be at the table from the beginning to design policies that serve more than the narrow commercial interests of the few large corporations who have been invited to participate,” wrote the companies.
They ended the letter by saying that Senator Wyden, as chair of the US Senate Finance Committee, is inaposition to keep the US at the forefront of innovation. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, နည်းပညာကုမ္ပဏီများပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်မိတ်ဖက်ဆန့်ကျင်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
20267	2 Fast Track, iFixit, Ron Wyden, TPP, Trans Pacific Partnership, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, ယူနိုက်တက်စတိတ်, United States Senate Committee on Finance
← သတင်းရေးသားခြင်းစက်ရုပ် သေစေနိုင်သောအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားဆံ့ရန်ဂီနီနိုင်ငံအဲန်ဂျီအိုများ →